WEBTALK ISIMEMO: ⚠️ Funda lokhu ngaphambi kokubhalisa! ⚠️ - 💌 I-WebTK - Ithikithi lakho ku WebTalK 🚀 Mema, Buyekeza, Izindaba nokuningi 🔥
WEBTALK ISIMEMO: ⚠️ Funda lokhu ngaphambi kokubhalisa! ⚠️
Ngesikhathi ujoyina Webtalk kungahle kubonakale kungumbono omuhle (bona isibuyekezo sethu esijulile), kunesinqumo esisodwa esingaguqula impilo yakho ngokuqinisekile: ukujoyina neqembu elifanele.
Iqembu elifanele yilona elingakunikeli kuphela ukwesekwa okuvelele futhi kukusiza ukuba uphumelele Webtalk, kodwa futhi ikunikeza a I-UNIQUE TEAM IQINISA IBONUS 💸💸💸: Isabelo semali seqembu le-50% sempilo. Lokho yi-50% ngaphezulu kwe Webtalk futhi kusho ukuthi ungathola isheke se-$ 1,000 ngaphandle kokuningi kokudluliselwa, ngoba nje uyingxenye ye-THE WEBTALK I-STARS TEAM. 🏆🏆🏆
Isinqumo sakho sibalulekile njengawe ayikwazi ukuguqula iqembu ngokuhamba kwesikhathi, ngaphandle kokuthi wenza i-akhawunti entsha futhi uvale eyedala.
Ngamalungu kakade we-3,000 + futhi ekhulayo, futhi ukugxila ngokukhethekile kubantu abadumile nabathonya abanokusekelwa kwe-VIP ezinikezele, Webtalk Stars Iqembu liyisiqinisekiso sokuthola imiphumela emihle Webtalk, kufaka phakathi nethuba lokuthola inzuzo lokuphila.
Ukuvuselelwa (2019 / 08): sihambise amakhomishini ethu okuqala kule nyanga 😀 Bona ujabule kanjani u-Iloanya ethola ukudluliselwa kwakhe ebhange ukusuka Webtalk Ithimba lezinkanyezi Is Lokhu kumane nje kuyisiqalo: njengoba imali yethu ikhula, kanjalo nezimali zethu ezizonikwa njalo ngenyanga! Silindele ukusabalalisa izigidi zamaRandi eminyakeni ezayo. 🤑
Sisebenza izinto obala ukuze usithembe!
Bona umlando wethu wokusatshalaliswa okugcwele kanye nobufakazi bokukhokha bakithi Revenue share Record...
Nansi indlela Webtalk Iqembu leSkyars lihlela ukwaba imali yalo:
Team Webtalk Uhlelo Lwabelana Ngemali Yezinkanyezi
Manje isinqumo sisezandleni zakho: uzokwazi ujoyine iqembu elihle kakhulu Webtalk?
Webtalk iyinhlangano yezokuxhumana emisha ehlanganisa okuhle kwe-Facebook, LinkedIn, Instagram, Slack, YouTube nokuningi endaweni eyodwa. Inikeza uhlelo oluhlukile olunenzuzo olukhulu olubizwa ngokuthi Social CPX: inkampani izokwaba kabusha ifike ku-50% yenzuzo yayo kubasebenzisi bayo abayisisekelo, njengami nawe, ngokuya ngenani labantu ababhekisa kubo Webtalk. Bona eyethu wokubala engenayo esezingeni eliphakeme ukufunda kabanzi ngamandla akho weholo.
The Webtalk Stars Iqembu lengeza uhlelo lwayo lokwabelana ngenzuzo ngaphezulu Webtalk: sabela kabusha i-50% yemiyalo yethu yanyanga zonke yamalungu eqembu lethu nezinhlangano zokupha. Lokho kufinyelela ku- $ 1000 ngenyanga nokuningi kumalungu ethu eminyakeni ezayo! Kungakho kubaluleke kakhulu ukuba ujoyine iqembu elifanele, okuwukuphela kweqembu elikunikeza ithuba elihle kakhulu lemali engenayo ngaphezulu Webtalk. 😄
Kuyini Webtalk futhi kungani kufanele ngijoyine namuhla?
Ukugcina impilo yakho yangasese, yobungcweti kanye neyamabhizinisi online kube ngumsebenzi owesabekayo.
Izinqumo eziningi kakhulu zenze ukudideka okukhulu lapho kungekho okubonakala sengathi akunike ukulawula kokuxhumana kwakho okufisayo.
Webtalk yiyokuqala yomphakathi wokuxhumana, ukusebenzisana nokuxhumana kwezokuhweba okwakhiwe ukuze kukusize ukuxhumana kangcono futhi ugcine isikhathi.
With Webtalk, uqinisa ubudlelwane nokukhulumisana okubambisene nokubonakalayo, ukwakha ukwethembeka kwakho futhi uqhube ibhizinisi lakho ngokuphumelelayo ngehabhu elisekelwe efwini elungiselela ngokucophelela ukuphila kwakho komuntu siqu, ubuchwepheshe kanye nebhizinisi kube lula ukuphatha izigaba.
Webtalk ikubeka ekulawuleni ukuthi ubani obona ukuthi nini nokuthi nini. Ukungahambi kahle komphakathi kokungeza ozakwabo, abangani nomndeni ku-inthanethi efanayo inethiwekhi sekuphelile.
Ukuphatha ukuxhumana kwakho kungcono ngokuqala kokuphatha othintana nabo kangcono.
Webtalkinqubo yokuxhumeka kwe-patent ekulindile i-patent ikusiza ukuthi ubhale ukuxhumana kwakho okusekelwe ebuhlotsheni bokuphila kwangempela.
Uma ukwakha ukuxhumana okusha ku Webtalk, ungabhala ukuxhumeka kochwepheshe njengomuntu ongathintana naye wokuthengisa, amathuba omsebenzi, amabhizinisi kanye nokutshala izimali usebenzisa Webtalkizici ze-e-akhawuntini ezakhelwe ngaphakathi neqoqo, bese ufaka amagama angukhiye nezincazelo ukusiza ukucinga lowo muntu esikhathini esizayo kwincwadi yakho yokuphathwa kokuxhumana.
Ngamanethiwekhi athandwayo, omuntu nomphakathi, Webtalk kukusiza ukuthi uphathe impilo yakho e-intanethi njengoba uthanda impilo yakho yangempela.
Ukwakha nokugcina ukuthembeka kubaluleke kakhulu kuzo zonke izici zempilo yakho.
Yingakho ke Webtalk ikuvumela ukuba ubonise ithalenta yakho ngokusebenzisa ukuqala okubonakalayo kanye negalari yemidiya ukuze ubonise iphothifoliyo yakho yezisebenzi, amadigri, izitifiketi, izithombe namavidiyo.
Amabhizinisi angabonisa futhi imikhiqizo, amasevisi, izilinganiso nezibuyekezo ekhasini lakho lebhizinisi ukukusiza ukwakha ukuthembana nokuheha amakhasimende amasha.
Esikhathini esizayo esiseduze, Webtalk izohlinzeka ngesici sokusesha emakethe ukuze kusize bonke abasebenzisi bathole imikhiqizo enikezwa ngamanye amalungu futhi baqhube ibhizinisi elengeziwe endaweni yakini.
Webtalk ufuna ukusiza wonke umuntu axhume amathuba amaningi futhi aphumelele ngokwengeziwe.
Yingakho ke Webtalk ukukhokhela amaphesenti angu-50 yazo zonke izimali ngenhlelo yokudlulisela imali ebizwa kakhulu Social CPX.
WebtalkAmakhompiyutha amakhulu kunawo wonke e-intanethi nakwe-e-commerce enza izigidigidi zamaRandi minyaka yonke kusuka ekukhangiseni, ukuvuselelwa kwe-premium kanye nemali yokuthengiselana.
I-Facebook ne-LinkedIn ngokwesilinganiso zikhiqiza u-$ 3 ngenyanga kusuka kuwo wonke umsebenzisi. I-Amazon idala cishe i-$ 70 ngomsebenzisi ngenyanga kusukela ekuthengiseni komkhiqizo.
Webtalk ikhiqiza inzuzo kusuka ekukhangiseni kwezokukhangisa, ukuthuthukiswa kwesici se-premium, izixazululo zethalenta kanye nemali yokuthengiselana njengabanye kodwa umehluko uwukuthi: siwabelana nawe.
Uma ubhalisa ohlelweni lobambiswano uzothola ikhomishini engu-10% kuyo yonke imali eyenziwe ngabasebenzisi namabhizinisi obhekisa kuwo Webtalk impilo.
Sonke siyazi ukuthi i-$ 1 ayishintshi impilo Webtalk wanquma ukwenza okungaqondakali futhi anikeze wonke umuntu isikweletu ngokuqala ukusabela kwamaketanga okudluliselwa.
With Webtalk's uhlelo lokubambisana elula “ngilandele Webtalk"Ukuthumela i-Facebook noma i-Twitter kungabangela ukuguqula impilo.
Ingxenye engcono kakhulu mayelana uhlelo lokubambisana Akudingeki ukuthi ushintshe noma yimaphi ama-umzila wakho wansuku zonke.
Yabelana ngezithombe zakho, amavidiyo namafayela nabangewona amalungu futhi uhola isikweletu ngokudluliselwa lapho ubhalisela ukubheka.
Abantu namabhizinisi abajoyina Webtalk ekuqaleni futhi usize ukukhulisa umphakathi uzothola ithuba elikhulu lokuthola imali.
Kugcine ukubuyekezwa November 26, 2019
Izigaba Mayelana Webtalk, Mayelana newebhutk.co Amathegi Real Brazilian, Abathengisi, Ukuthengiswa kwe-Influencer, Marketing, Abaculi, Abaculi, I-US Dollar, Usher Shiya amazwana Imeyili kwemikhumbi
Webtalk Ukubuyekezwa (Ibhonasi ngaphakathi 🤑) 2020
I-2 Chainz: Amafonti we-3 Million Fans anokulinda Webtalk!
Ikhaya - Mayelana Webtalk - WEBTALK ISIMEMO: ⚠️ Funda lokhu ngaphambi kokubhalisa! ⚠️